Dowladda Soomaaliya oo waddo qorsho lagu tira koobayo Ajaanibta dalka – news
Dowladda Soomaaliya oo waddo qorsho lagu tira koobayo Ajaanibta dalka
Agaasimaha ayaa sheegay in saddexdii bilood ee la soo dhaafay ay diiwaan geliyeen dhammaan dadka Ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalka, iyagoo ka faa'iideysanaya xaaladda xirnaashaha dalka ee COVID-19.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Soomaaliya ayaa haatan waddo qorshaha tira koob loogu sameynayo ajaanibta dalka dhanka xudduudaha ah ka soo gelayo sida uu sheegay Agaasimaha Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale 'Koofi'.
Koofi ayaa sheegaya in ay ka faa'iideysteen saddexdii ee Bilood ee dalka COVID-19 u xirnaa in ay diiwaan geliyaan dhammaan Ajaanibta dalka gudihiisa ku sugan, sidoo kale adkeeyeen xudduudaha iyo garoomada ay ka soo geli karaan, iyagoona kaashanaya Wasaaradda amniga dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale Agaasime Koofi ayaa sheegay in ay haatan ku guuleysteen sixitaan Baasaboorka Soomaaliga ah hagaantiisa, sumcadda Baasaboorka iyo shaqooyinka lagu qoro, halka markii hore qof walbo wuxuu rabo isaga qoran jiray, balse hadda taasi aad looga shaqeeyay, lana mideeyay.
Inkastoo uusan Agaasimaha sheegin tirada rasmiga ah ee Ajaanibta Hay'adda Socdaalka diiwaan gelisay, hadana waxaa uu tilmaamay in ay xaddideen guud ahaan garoomada ay ka degi karaan duulimaadyada caalamiga ah, xuddudaha iyo dekadaha iyagoo kaashanaya dowlad goboleedyada.
Waxaa uu sheegay in ay jiraan caqabado ka heysto dhanka dadka qaxootiga ah ee dalka sida sharci darrada ah ku soo galay Afartii sano ee la soo dhaafay, balse ay arintaas wax ka weydiin doonaan hay'adda qaxootiga addoonka ee UNHCR oo arintaan si dhow u la socto.
Dhawaan ayaa magaalada Dhuusamreeb ee caasimadda Galmudug waxaa shir uga furmay laamaha Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha dowladda iyo dowlad goboleedyada, kaasoo looga hadlayo arrimaha xuduudaha iyo tirakoobka Ajaanibta dalka ku soo qul qulaya. Shirkaan ayaana mid saddex billa ah.